Ihe na-emebi emebi polystyrene | Akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ Green
Ihe na-emebi emebi polystyrene
Adrian | | Gburugburu
El mmanụ nwere otutu ngwa otu n'ime ihe kachasị eji mee bụ ịfụfụ ụfụfụ polystyrene ngwaahịa a na-eji n'ọtụtụ puku ngwaahịa ruo ọtụtụ iri afọ. Ma ngwaahịa a abụghị naanị na-emerụ ya na nrụpụta ya mana mmebi gburugburu ebe obibi ya dịkwa oke ike, na-ewepụta nnukwu mkpofu mmetọ.
Ndị nyocha si Case Western Reserve University ewepụtala ụfụfụ polystyrene ihe okike nke ihe mejupụtara ya bụ mmiri ara ehi, ụrọ na glyceraldehyde.
Ihe a siri ike ma nwee àgwà yiri nke ahụ na polystyrene dabeere na mmanụ ala. A pụrụ iji ngwaahịa ọhụrụ a na mkpuchi, nkwakọ ngwaahịa, akpa, trays, arịa ụlọ, wdg.
Polystyrene dị na ndụ onye ọ bụla kwa ụbọchị ebe ọ bụ na ọnụ ọgụgụ ngwaahịa ndị na-eji ya eme ihe dị ukwuu.
Ọ dị mkpa na a ga-amalite dochie ihe ndị na-eme mmanụ ala na imepụta ngwaahịa dị iche iche ebe ọ bụ na n'oge na-adịghị anya ọ ga-abụ ihe akụ na ụba na-agaghị ekwe omume na gburugburu ebe obibi, mmetụta gburugburu ebe obibi na ọ na-arụpụta.
N'ihi ihe ndị e ji kee polystyrene biodegradable na usoro nrụpụta dị mfe, n'ezie ngwaahịa a ga-adị oke ọnụ na ọnụ ahịa ya ma nwee ike iji ya azụmaahịa.
Amabeghị ya mgbe enwere ike ịmepụta ya mana ọ ga - abụrịrị n'ahịa, n'oge na - adịghị anya, n'ihi oke àgwà nke ihe a.
Ihe ndị a na-egosi na ọ ga-ekwe omume ịkwụsị ịdabere na mmanụ na ihe ndị sitere na ya na enwere ike iji ihe ndị ọzọ na-eme ka gburugburu ebe obibi ma ọ bụ ihe ndị ọzọ nwee ike rụọ ọrụ dị iche iche.
Iji ihe omume a ga - ebelata mmetọ na ego nke mkpofu, n'ihi na a na-eji polystyrene eme ihe n'ụwa nile na n'ọtụtụ ụzọ dị iche iche.
Ọganihu nke teknụzụ na-adọrọ adọrọ na ọ bụrụ na a kwadoro nyocha nke ihe ndị metụtara gburugburu ebe obibi, ọnọdụ gburugburu ebe obibi na gburugburu ụwa ga-akawanye mma na obere oge.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ Green » Gburugburu » Ihe na-emebi emebi polystyrene
Mkpịsị aka elekere enyi na gburugburu ebe obibi